နာပိုလီတို့ ဘာကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်စွမ်း ရှိသလဲ ဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့ - SPORTS MYANMAR
နာပိုလီတို့ ဘာကြောင့် ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်စွမ်း ရှိသလဲ ဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ ယာဂန်ကလော့
လီဗာပူး နည်းပြ ယာဂန်ကလော့က သူတို့ကို အုပ်စု E အဖွင့် ပွဲစဉ်မှာ အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ နာပိုလီ အသင်းဟာ ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကို ဆွတ်ခူးနိုင်စွမ်း ရှိတယ်လို့ ထောက်ခံ သွားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ ဥရောပ ချန်ပီယံ လီဗာပူး ဟာ အင်္ဂါနေ့က နာပိုလီ အသင်းကို နေပယ်မှာ ၂-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပြီး ၂ ရာသီ ဆက်တိုက် အဝေးကွင်း ရှုံးပွဲနဲ့ ရင်ဆိုင် ခဲ့ရပါတယ်။
ဒရီးစ်မာတန်စ်ဟာ ၈၂ မိနစ်မှာ ပင်နယ်တီ ကနေ နာပိုလီ အတွက် အဖွင့်ဂိုးကို သွင်းယူ ခဲ့ပြီး ဒီပင်နယ်တီဟာ ပွဲရဲ့ အလှည့်အပြောင်း တစ်ခု ဖြစ်ကာ နည်းပြ ယာဂန်ကလော့ နဲ့ လူတော်တော် များများ ကတော့ ကယ်လီဟွန် ဟန်ဆောင် လှဲချ ခဲ့တယ်လို့ ယူဆ နေကြပါတယ်။ ဂိုးပေးလိုက် ရပြီးနောက် ကစားကွက် ပျက်သွား ခဲ့တဲ့ လီဗာပူး အသင်းဟာ ၉၂ မိနစ် မှာတော့ ဗန်ဒိုက် ရဲ့ အမှား ကနေ တဆင့် လိုရန်တီ ရဲ့ ဂိုးသွင်းခြင်းကို ခံခဲ့ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယာဂန်ကလော့ က ပွဲအပြီးမှာ ဒိုင်လူကြီး ရဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် ပင်နယ်တီ ဆုံးဖြတ်ချက် နဲ့ သူ့ တိုက်စစ် ကစားသမား တွေရဲ့ final pass တွေကို စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေ ခဲ့ပြီး ကာလို အန်ဆယ်လော့တီ အသင်းရဲ့ ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် အခွင့်အရေး နဲ့ ပက်သက်ပြီး မေးမြန်း ခဲ့ရာမှာ ကလော့ က “သူတို့ ချန်ပီယံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရှင်းပါတယ်။ အကယ်၍ ကိုယ့်အသင်းမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အစီအစဉ် ရှိတယ် ၊ ကစားသမားကောင်းတွေ ရှိနေတယ် ဆိုရင်…သူတို့မှာ ဒါတွေ ပိုင်ဆိုင် ထားပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သူတို့ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲ နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံ အရ ကတော့ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ကို ဆွတ်ခူး နိုင်ဖို့ အတွက် ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး အသင်း ဖြစ်နေစရာ မလို အပ်ပါဘူး။
မှန်ကန်တဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ ကိုယ်ရှိ နေရ ပါမယ်။ ကိုယ့်အနေနဲ့ တစ်ချို့ အခြေအနေ တွေမှာ ကံကောင်း ရပါမယ်။ အခန်းထဲမှာ ရှိတဲ့ လူ၂ ယောက်တည်း ကသာ ဒါဟာ ပင်နယ်တီလို့ ယူဆ ခဲ့မယ် ဆိုရင် ဒါဟာ ပင်နယ်တီ ဖြစ်တယ်လို့ ကိုယ့်ဘက်က လက်ခံ သွားရ ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါပါပဲ။ သူတို့ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ဆွတ်ခူး နိုင်စွမ်း ရှိတာ ကတော့ အမှန်ပါပဲ။” လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။
စီးရီးအေ ပြိုင်ပွဲဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ထက် နောက်ကျမှ ကျင်းပ ခဲ့တာကြောင့် နာပိုလီ ဟာ လီဗာပူးထက် ပိုမို လန်းဆန်း နေကာ ပွဲကို အင်ပြည့်အားပြည့်နဲ့ အဆုံးသတ် နိုင်ခဲ့တာလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကလော့က မကျေမနပ် တုန့်ပြန် ခဲ့ပါသေးတယ်။
ကလော့ က “ဒီနေ့ည မေးခွန်းတွေဟာ တကယ့်ကို စိန်ခေါ်မှု ပြင်းထန် ပါတယ်။ စကိုင်းအီတလီယာ က လူဟာ နာပိုလီဟာ ကျွန်တော်တို့ထက် ပိုကောင်း ခဲ့သလား ဆိုတာကို မေးမြန်း ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲဟာ ဒီလိုတော့ ကျွန်တော် မထင်ပါဘူး။ ပွဲကစား နေချိန်မှာ သူဘယ်ရောက် နေသလဲ ကျွန်တေ်ာ မသိပါဘူး။ အခု ကျွန်တော်တို့ နွမ်းနယ် နေသလားလို့ ခင်ဗျားတို့ မေးတယ်နော်။ ဘယ်သူ့ဘက်က ကြွက်တက်တာလဲ? ဘယ်သူ လဲကျ ခဲ့တာလဲ? လီဗာပူး ကစားသမားလား နာပိုလီ ကစားသမာလား? သူတို့ အနိုင်ရနေတဲ့ အချိန်မှာမှ ကျွန်တော်တို့ထက် လန်းဆန်းတဲ့ပုံ ပေါက်တာပါ။ ဒီလို ပွဲမျိုးရဲ့ ပုံမှန် ကြံ့ခိုင်မှု ပြသနာတွေက လွဲပြီး ဘာ ကြံ့ခိုင်မှု ပြသနာ မှ မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ပွဲက အရမ်း ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်လို့ပါ။ ဒီနေ့ကျွန်တော့်ရဲ့ အသင်း ကြံ့ခိုင်မှု ပြသနာ ဘာမှ မရှိ ခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တေ်ာတို့ ဒီအခြေအနေတွေ အဆုံးသတ် ရပါမယ်။ ဘ၀မှာ လူတိုင်းလူတိုင်း ကောင်းမွန်တဲ့ အခိုက်တန့်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီညမှာတော့ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ သာမန် ကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့် ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
နာပိုလီတို့ ဘာကွောငျ့ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ဆှတျခူး နိုငျစှမျး ရှိသလဲ ဆိုတာ ပွောပွလိုကျတဲ့ ယာဂနျကလော့
လီဗာပူး နညျးပွ ယာဂနျကလော့က သူတို့ကို အုပျစု E အဖှငျ့ ပှဲစဉျမှာ အနိုငျယူခဲ့တဲ့ နာပိုလီ အသငျးဟာ ဒီရာသီ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလားကို ဆှတျခူးနိုငျစှမျး ရှိတယျလို့ ထောကျခံ သှားခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိ ဥရောပ ခနျြပီယံ လီဗာပူး ဟာ အင်ျဂါနကေ့ နာပိုလီ အသငျးကို နပေယျမှာ ၂-၀ နဲ့ ရှုံးနိမျ့ ခဲ့ပွီး ၂ ရာသီ ဆကျတိုကျ အဝေးကှငျး ရှုံးပှဲနဲ့ ရငျဆိုငျ ခဲ့ရပါတယျ။
ဒရီးဈမာတနျဈျဟာ ၈၂ မိနဈမှာ ပငျနယျတီ ကနေ နာပိုလီ အတှကျ အဖှငျ့ဂိုးကို သှငျးယူ ခဲ့ပွီး ဒီပငျနယျတီဟာ ပှဲရဲ့ အလှညျ့အပွောငျး တဈခု ဖွဈကာ နညျးပွ ယာဂနျကလော့ နဲ့ လူတျောတျော မြားမြား ကတော့ ကယျလီဟှနျ ဟနျဆောငျ လှဲခြ ခဲ့တယျလို့ ယူဆ နကွေပါတယျ။ ဂိုးပေးလိုကျ ရပွီးနောကျ ကစားကှကျ ပကျြသှား ခဲ့တဲ့ လီဗာပူး အသငျးဟာ ၉၂ မိနဈ မှာတော့ ဗနျဒိုကျ ရဲ့ အမှား ကနေ တဆငျ့ လိုရနျတီ ရဲ့ ဂိုးသှငျးခွငျးကို ခံခဲ့ ရတာ ဖွဈပါတယျ။
ယာဂနျကလော့ က ပှဲအပွီးမှာ ဒိုငျလူကွီး ရဲ့ အငွငျးပှားဖှယျ ပငျနယျတီ ဆုံးဖွတျခကျြ နဲ့ သူ့ တိုကျစဈ ကစားသမား တှရေဲ့ final pass တှကေို စိတျပကျြလကျပကျြ ဖွဈနေ ခဲ့ပွီး ကာလို အနျဆယျလော့တီ အသငျးရဲ့ ဒီရာသီ ခနျြပီယံလိဂျ အခှငျ့အရေး နဲ့ ပကျသကျပွီး မေးမွနျး ခဲ့ရာမှာ ကလော့ က “သူတို့ ခနျြပီယံ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါဟာ ရှငျးပါတယျ။ အကယျ၍ ကိုယျ့အသငျးမှာ ကောငျးမှနျတဲ့ အစီအစဉျ ရှိတယျ ၊ ကစားသမားကောငျးတှေ ရှိနတေယျ ဆိုရငျ…သူတို့မှာ ဒါတှေ ပိုငျဆိုငျ ထားပါတယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ သူတို့ ဒီပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျစှဲ နိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံ အရ ကတော့ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ကို ဆှတျခူး နိုငျဖို့ အတှကျ ကမ်ဘာ့ အကောငျးဆုံး အသငျး ဖွဈနစေရာ မလို အပျပါဘူး။
မှနျကနျတဲ့ အခိုကျအတနျ့မှာ ကိုယျရှိ နရေ ပါမယျ။ ကိုယျ့အနနေဲ့ တဈခြို့ အခွအေနေ တှမှော ကံကောငျး ရပါမယျ။ အခနျးထဲမှာ ရှိတဲ့ လူ၂ ယောကျတညျး ကသာ ဒါဟာ ပငျနယျတီလို့ ယူဆ ခဲ့မယျ ဆိုရငျ ဒါဟာ ပငျနယျတီ ဖွဈတယျလို့ ကိုယျ့ဘကျက လကျခံ သှားရ ပါမယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒါပါပဲ။ သူတို့ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ဆှတျခူး နိုငျစှမျး ရှိတာ ကတော့ အမှနျပါပဲ။” လို့ ဆိုလိုကျ ပါတယျ။
စီးရီးအေ ပွိုငျပှဲဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ ထကျ နောကျကမြှ ကငျြးပ ခဲ့တာကွောငျ့ နာပိုလီ ဟာ လီဗာပူးထကျ ပိုမို လနျးဆနျး နကော ပှဲကို အငျပွညျ့အားပွညျ့နဲ့ အဆုံးသတျ နိုငျခဲ့တာလား ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို ကလော့က မကမြေနပျ တုနျ့ပွနျ ခဲ့ပါသေးတယျ။
ကလော့ က “ဒီနညေ့ မေးခှနျးတှဟော တကယျ့ကို စိနျချေါမှု ပွငျးထနျ ပါတယျ။ စကိုငျးအီတလီယာ က လူဟာ နာပိုလီဟာ ကြှနျတျောတို့ထကျ ပိုကောငျး ခဲ့သလား ဆိုတာကို မေးမွနျး ခဲ့ပါတယျ။ ဒီပှဲဟာ ဒီလိုတော့ ကြှနျတျော မထငျပါဘူး။ ပှဲကစား နခြေိနျမှာ သူဘယျရောကျ နသေလဲ ကြှနျတျော မသိပါဘူး။ အခု ကြှနျတျောတို့ နှမျးနယျ နသေလားလို့ ခငျဗြားတို့ မေးတယျနျော။ ဘယျသူ့ဘကျက ကွှကျတကျတာလဲ? ဘယျသူ လဲကြ ခဲ့တာလဲ? လီဗာပူး ကစားသမားလား နာပိုလီ ကစားသမာလား? သူတို့ အနိုငျရနတေဲ့ အခြိနျမှာမှ ကြှနျတျောတို့ထကျ လနျးဆနျးတဲ့ပုံ ပေါကျတာပါ။ ဒီလို ပှဲမြိုးရဲ့ ပုံမှနျ ကွံ့ခိုငျမှု ပွသနာတှကေ လှဲပွီး ဘာ ကွံ့ခိုငျမှု ပွသနာ မှ မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ပှဲက အရမျး ပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျလို့ပါ။ ဒီနကြေှ့နျတေျာ့ရဲ့ အသငျး ကွံ့ခိုငျမှု ပွသနာ ဘာမှ မရှိ ခဲ့ပါဘူး။
ကြှနျတျောတို့ ဒီအခွအေနတှေေ အဆုံးသတျ ရပါမယျ။ ဘဝမှာ လူတိုငျးလူတိုငျး ကောငျးမှနျတဲ့ အခိုကျတနျ့တှေ လိုအပျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ဒီညမှာတော့ အပေါငျးလက်ခဏာဆောငျတဲ့ အခိုကျအတနျ့တှေ မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ သာမနျ ကိစ်စပါ။ ဒါပမေယျ့ ကွံ့ခိုငျမှုနဲ့ ဘာမှ မဆိုငျပါဘူး။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။